Instagram gabi ahaanba waa la beddelay waxaanan kaaga sheegi doonnaa arrintaan ku jirta barmaamijkeenna Podcast | Wararka IPhone
Podcast 7 × 09: Gurigaaga tag, Instagram, waad sakhraansan tahay
Waxay ahayd wax iska cad. inta aan dooneyno inaan arrimaha qaar iska ilaalino, Toddobaadkan ma aanan ka fikiri karin cudurdaar kasta oo aan uga hadlin mid ka mid ah kuwa ugu hadal haynta badan ee maalmihii dhowaa baraha bulshada. Iyo haa waxaan ula jeedaa ku dhaq dhaqaaqa xagjirka ah ee ay Instagram ku bixisay muuqaalkiisa. Waa la aqbali karaa dadka qaar, in ka badan inta lagu dhaliili karo kuwa kale ... Fikradaha way kala qaybsan yihiin waxaanan ku siinaynaa aragtidayada qormadeena maanta. Dabcan, haddii aad ka mid tahay kuwa neceb astaanta cusub, waxaan heysanaa xalka ugu habboon si aad mar labaad u hesho midka hore.
Periscope iyo Telegram ayaa sidoo kale la cusbooneysiiyay toddobaadkan, mid leh taageerada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo horumarinno kala duwan oo gudaha ah y kan kale oo leh ikhtiyaar lagu muransan yahay inuu awood u yeesho inuu noqdo farriimaheenna mar la soo diro. Intaas waxaa sii dheer, lisaga iPhone 7 wararka xanta ah ayaa sii xoogeysanaya, runtiina waa taas Wax kasta oo illaa hadda laga wada hadlayo oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee soo socda ee Apple uma muuqato wax aad noogu fiican. In kasta oo aan wax la qaadan karin hubaal weli.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 7 × 09: Gurigaaga tag, Instagram, waad sakhraansan tahay
Waad ii sheegi kartaa sababta aan uheysto barnaamijka instagram-ka ee la cusbooneysiiyay, oo waxaan haystaa kaliya astaanta, isku xirnaanta wali waxay umuuqataa tii hore. Waxaan hayaa iPhone 6 Plus nooca 9.3.2
Reply to Xab1t0  (@ Xab1t0)